ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ်ဆိုးကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းဆရာမ | Buzzy
ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ်ဆိုးကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းဆရာမ
တစ်ခါမှားရင် တစ်သက်လုံးဆိုတာ မှန်နေမလား
ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး တစ်ခုမှာ ပွန်းစတားအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ ရုရှားကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဟာ ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။
ညဈညမျးဗီဒီယို ရိုကျကူးထုတျလုပျရေး တဈခုမှာ ပှနျးစတားအဖွဈ ဝငျရောကျလုပျကိုငျဖူးတဲ့ ရုရှားကြောငျးဆရာမတဈဦးဟာ ကြောငျးကနေ ထုတျပယျခွငျး ခံလိုကျရပါတယျ။
သူမကတော့ တိုပူးလ်လို့ အမည်ရပြီး ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတာပါ ။ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီဗီဒီယိုကို အင်တာနက်မှာ တွေ့ရှိပြီး ကျောင်းသားတွေဆီကို ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကျောင်းဆရာမရဲ. မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းဆီကိုပါ ပြန့်နှံသွားပါတော့တယ်။
သူမကတော့ တိုပူးလျလို့ အမညျရပွီး ညဈညမျးဗီဒီယိုတဈခုထဲမှာ ကြောငျးသူလေးတဈယောကျ အနနေဲ့ သရုပျဆောငျခဲ့ဖူးတာပါ ။ တဈယောကျယောကျက ဒီဗီဒီယိုကို အငျတာနကျမှာ တှရှေိ့ပွီး ကြောငျးသားတှဆေီကို ပေးပို့ခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ကြောငျးတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ကြောငျးဆရာမရဲ. မိဘဆှမြေိုး အသိုငျးအဝိုငျးဆီကိုပါ ပွနျ့နှံသှားပါတော့တယျ။
အခုလို လူပေါင်းများစွာဆီကို ဒီဗီဒီယို ပြန့်နှံသွားပြီးချိန်မှာ ကျောင်းဥက္ကငှက သူမကို ထွက်စာတင်ဖို့ ဆိုလာပါတော့တယ် ။ သူမကတော့ ဒီဗီဒီယိုဟာ ၂၀၁၁ လောက်က ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဟိုးတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် သူမမှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
သင်ရော ဘယ်လို ထင်ပါသလည်း ??
အခုလို လူပေါငျးမြားစှာဆီကို ဒီဗီဒီယို ပွနျ့နှံသှားပွီးခြိနျမှာ ကြောငျးဥက်ကငှက သူမကို ထှကျစာတငျဖို့ ဆိုလာပါတော့တယျ ။ သူမကတော့ ဒီဗီဒီယိုဟာ ၂၀၁၁ လောကျက ရိုကျကူးထားတာ ဖွဈကွောငျးနဲ့ ဟိုးတုနျးက ဖွဈခဲ့တာတှအေတှကျ သူမမှာ အပွဈမရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယျ။
သငျရော ဘယျလို ထငျပါသလညျး ??